ब्राजिलको जितमा नेयमारको रेकर्ड – Dainik Sangalo
ब्राजिलको जितमा नेयमारको रेकर्ड
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र २५, २०७८ समय: ९:३७:०६
फिफा विश्वकप २०२२ को छनोट खेलमा ब्राजिलले लगातार आठौँ जित निकालेको छ । आगामी वर्ष कतारमा आयोजना हुने विश्वकपको दक्षिण अमेरिकी छनोटतर्फ ब्राजिलले पेरुमाथि २–० गोलको जित निकाल्दै विजयी यात्रा कायमै राखेको हो ।
शुक्रबार बिहान ब्राजिलको मैदानमा भएको खेलमा घरेलु टिमलाई जिताउन नेयमार जुनियर र एभर्टन रिबेइरोले एक–एक गोल गरे । खेलको १४औँ मिनेटमा रिबेइरोले नेयमारको पासमा गोल गर्दै ब्राजिललाई सुरुआती अग्रता दिलाएका थिए ।
यस्तै, ४०औँ मिनेटमा नेयमारले गोल गर्दै ब्राजिललाई २–० गोलको जित दिलाए । जितसँगै शीर्ष स्थानको ब्राजिलले आठ खेलमा २४ अङ्क जोडेको छ । पेरु भने आठ अङ्कसहित सातौँ स्थानमा छ ।
यसैगरी, यो जितसँगै नेयमारले नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । उनी विश्वकपको छनोट खेलमा सर्वाधिक धेरै १२ गोल गर्ने ब्राजिलियन खेलाडी बनेका हुन् ।
कम्पनीको लापरवाहीका कारण मलेसिया मा एक नेपालीको यसरी मृ,xत्यु
कम्पनीको लापरवाहीका कारण मलेसिया मा यसरी मृ,xत्यु हुन्छ! नेपालको दाङका हाङसपुर बगालेका / पल राज ओलिलाई को,भिड देखाएको थियो एक पटक एम्बुलेन्स आयो केही भ‌एको छैन! भनेर फर्कियो, उहाँलाई कोभिडले झन् च्याप्दै गयो, साथीहरुले पटकपटक कम्पनीलाई खबर गर्दा समेत सुनुवाई भएन! अन्ततः उहाँको मृ,xत्यु भयो ! कहिले सम्म यस्तो घटना मनले नमान्दा नमान्दै लेख्न पर्ने हामिले आफ्नो एकछाक टार्न पैसा खरृच गरेर आफ्नो भुमि नै छाडेर बिदेशीनु परेको छ त्यो अबस्था पनि नालायक सरकारले कान नहेर्न? कहिले सम्म यस्तो जनताले मर्नु ? कसलाई के भन्नु?
Last Updated on: September 10th, 2021 at 9:37 am